Uhuru:qof kasta lama ilaalin karo - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda amni xumada ee Kenya ka taagan iyo weerarkii ugu dambeeyay ee 28-ka qof ay ku dhinteen ee ka dhacay Mandera. Sidoo kale, urur ay ku mideysan yihiin kaniisadaha Kenya ayaa maanta eedeeyay hogaamiyayaasha Muslimiinta, iyadoo ay culimada Islaamkana ay arrintaasi iska difaaceen.
Uhuru Kenyatta Madaxweynaha Kenya oo shalay ka soo noqday safar uu ku maqnaa ayaa meesha ka saaray dhammaan eedaha dowladda loo jeedinayo ee ku saabsan sida ay u maareysay arrimaha amniga.
Waxaa kaloo uu sheegay in ciidamo ku filan dalka aysan suurta gal ahayn in la helo, amniga ay masuuliyad ka saran tahay qof kastaa. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa ka jawaabay sidoo kale, dalabka dibadbaxyadii shalay ee ahaa inay booliska Kenya ay ku guuldareysteen sugidda ee Kenya.
Uhuru Kenyata waxuu yiri “Ma la heli doono ciidamo ku filan oo ilaaliya qof kastaa. Masuuliyadda ilaalinta waxay saran tahay adiga iyo aniga. Masuuliyadda ka hortagidda weerarada waxay saran tahay adiga iyo aniga. Hadaba xittaa hadaan xoojino amnigeena, xittaa haddii aan aragno inay habacsanaan jirto, xittaa haddii aan soo bandhigtay habacsanaantaasi, waa inaan ogaanaa. Is casilaadda boqlkiiba-boqol maahan mid bad qab ah, illaa aan ka aqbaleyno masuuliyadda amnigeena naga saran.”
Sidoo kale, ururka ay ku mideysan yihiin kaniisadaha Kenya oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa eedeeyay hogaamiyayaasha muslimiinta, waxayna tilmaameen inay waxba ka qaban waayeen weerarada ka dhanka ah masiixiyiinta. Peter Karanja oo ka mid ah dadkii warsaxaafadeedka qabtay ayaa warbaahinta u sharaxay waxa ay ka hadlayaan. “Masiixiyiinta hadda ma aaminayaan war-saxaafadeedyada ay soo qorayaan hogaamiyayaasha muslimiinta, ee ay naftooda iyo diinta islaamka uga fogeynayaan weerarada argagixisada, markastaa mid baa dhacdo, hogaamiyayaasha welidood ma sheegin wax cadeyn ah oo muujinaya inay qaadayaan tallaabo si ay uga hortagaan una difaacaan ficiladaasi dadka masiixiyiinta ah, ka hor inta aysan dhicin. Waxaan rajeyneynaa inaan Muslimiinta oo dhan xasuusino, inay ku nool yihiin meelkastoo Kenya ka mid ah, meelaha qaarna ay aad ugu yaryihiin, waxay ka faa’ideysanayaan sida karistaanka, isdexgalka nabadda iyo xushmadda ee dalka oo dhan ka jirta. Hadaba waa dantooda inay bedelaan carada ka jirta kaniisadaha.”
Sheekh Cabdilaahi Siraad oo u jawaabay kaniisadaha ayaa sheegay inaysan doodaasi ku waafaqsaneen kaniisadaha. Dooda ka dhalatay weerarkii subixii sabtida ka dhacay meel u dhow magaalada Mandera ayaa aad sare ugu sii keceysa, waxayna hadda gaartay labada aqal ee baarlamaanka Kenya.
Balse, madaxda dhanka amniga ayaa sheegay in ammaanka aad loo adkeeyay, waxaana ciidamo badan la geeyay xuduudaha, gaar ahaan dhanka deegaanka Mandera.
Gudoomiyaha Mandera, Cali Roba ayaa meel fagaaraha ka gashay maanta, in dhammaan basaska aysan bixi karin iyadoo aysan ilaalo la socon. Wuxuuna tilmaamay in amniga ay kawada shaqeeyaan dowladda deegaanka iyo tan dhexe.
Minnesota: Soomaali Lagu soo Oogay Dacwad Argagixiso masaajidada lagala baxay